HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulJadwalka tareenka Adapazarı Pendik wuxuu kordhay
09 / 12 / 2019 34 Istanbul, 54 Sakarya, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Adeegga tareenka adapazari pendik wuu kordhay
Jadwalka tareenka Adapazarı Pendik wuxuu kordhay; Tirada duulimaadyada khadka Adapazarı-İzmit-Pendik, oo ah halka duulimaadyada isku midka ah loo sameeyo 8 maalin walba, ayaa la kordhiyey ilaa maanta. Waxaa jiri doona socdaal 10 ah oo ay wadaagaan Adapazarı iyo Pendik
Safarka ugu horreeya ee safarka Adapazarı wuxuu ka bilaaban doonaa 05.50 waxaana lagu dhammeysan doonaa Pendik ka dib markii uu istaago Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke iyo Gebze saldhigyada siday u kala horreeyaan. Laga soo bilaabo Adapazari ilaa Pendik, tareenka wuxuu ka bixi doonaa maalin kasta 05.50, 07.00, 13.05, 14.30 iyo 18.50. Laga soo bilaabo Pendik ilaa jihada Adapazarı, waqtiga bixitaanka tareenka waxaa loo go'aamiyaa sida 08.11, 10.50, 16.35, 18.35 iyo 21.15.
Saacadaha ka bixista Izmit
Waqtiyada bixitaanka ee tareenka Adapazarı-Pendik ee ka socda Izmit ayaa loo diyaariyay ilaa maanta (Axadda):
Jihada Adapazarı: 09.06-11.46-17.32-19.32-22.17
Ku aaday Istanbul: 06.34-07.48-13.49-15.14-19.35
Saldhigyada ay ku taallo Jasiiradda Express Express oo joogsata oo tagta
Saldhigga Adapazari, Mithatpasa, Arifiye, Sapanca, Buyukderbent, Kosekoy, Izmit YHT, Derince YHT, Yarimca YHT, Hereke YTH, Gebze, Cayirova, Tuzla, Shipyard, Istanbul (Pendik)
Adapazarı Tareenka waa in la kordhiyaa
Adapazari - Istanbul (Pendik) Jadwalka Tareenka Jadwalka 2019
Tareenka Konya ayaa imaanaya inta uu sugayo tareenka Pendik-Adapazari
Tareenka Adapazarı-Pendik Tareenka wuxuu joogaa Köseköy iyo B.Derbent
Adapazarı Pendik Jadwalka Tareenka